Beesha caalamka oo digniin u dirtay xubnaha ku shiraya magaalada Dhuusamareeb – Calanka.com
Beesha caalamka oo digniin u dirtay xubnaha ku shiraya magaalada Dhuusamareeb
in Gudaha — by admin —	February 5, 2021
War kooban oo caawa ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu soo dhaweeyay sida uu ku socdo shirka Dhuusamareeb, waxaana fariin loogu diray madaxda halkaas ku shiray.
Qoraalka ayaa lagu yiri “Saaxiibada Beesha Caalamku waxay soo dhoweynayaan kulanka dhexmaraya Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxda Dowladaha Xubnaha ka ah Federaalka oo hadda ka socda magaalada Dhuusomareeb.”
“Waxaan hoosta ka xariiqeynaa in natiijooyin kasta oo beddel ka ah kii lagu heshiiyay, oo ay ka midyihiin geeddi-socod kale oo kan barbar socda ama doorashooyin qayb ah oo aan loo dhammayn, ama tallaabooyin kale oo aan ahayn hanaanka doorashooyinka lagu heshiiyey, ay noqon doonaan dib-u-dhac aan heli doonin taageerada saaxiibada caalamka,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Sidaa darteed, baa lagu yiri qoraalka, waxaan ugu baaqeynaa dhammaan madaxda siyaasadda inay mudnaanta siiyaan sidii lagu heli lahaan hab horay loogu socdo iyadoo jirin dib u dhac dheeraad ah.
Waxaa lagu soo gunaanaday qoraalka kooban ee beesha caalamka “Saaxiibada beesha caalamku waxay mar kale ugu baaqayaan dhammaan madaxda Soomaaliya inay heshiis wadar ogol ah oo la isku raacsan yahay ka gaaraan hirgelinta doorashooyinka si deg deg ah oo oo ah arrin ay danta qaranku ku jirto.”